Dagaal dhabbo gal ah Oo ka dhacay Shabeelaha Hoose – Radio Baidoa
Dagaal dhabbo gal ah Oo ka dhacay Shabeelaha Hoose
By Webmaster	 On Oct 15, 2020
Wararka aan ka helayno Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in uu ka dhacay Gobolkaasi dagaal Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dhaliyay oo dhex-maray Alshabaab iyo Ciidan ku socdaalayay duleedka Afgooye, waxaana wararku ay intaasd ku darayaan in Weerarkaas lagu dilay Askar ka tirsanb Ciidanka Dowladda.
Weerarka aya yimid kadib markii sida la sheegay ay dagaalamayaasha Al-shabaab ay weerar dahbbagal ah ku qaadeen Ciidanka, waxaana Shabaaab ay weerareen sida dad goob joogayal ah inoo sheegeen Gaadiid ay wateen Ciidanka Ciidamo ka tirsan Dowladda.
Dagaalka aya si gaar ah uga dhacay sida la sheegay degaanka Buulalow ee degmada Afgooye, waxaana lasoo wariyay in ay ku dhinteen Asakar ka tirsan Ciidanka Dowladda, waxaana ka mid ahaa Askarta weerarkaas ku dhintay Cabdulle Cali Mire Iyo Cabdi maxamed Guutaale.
Ciidanka ku dhintay dagaalka oo ka tirsan millateriga ayaa waxaa la shegay in uu jiro khasaare farabadan oo ka dhashay dagaalkaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaaraha rasmiga ah ee ka dagaalkaas dhexemaray Ciidanka Dowladda iyo Al-shabaab.
Dagaalamauyaasha Al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalkaas ay ku dileen Askar farabadan oo ka tirsan Ciidanka Dowladda, waxaana Baraha Internet-ka ee Al-shabaab lagun daabacay in ay dagaalka oo aha mid dhabbagal ah ay ku dileen tiro Askar ah oo ka tiirsanaa Ciidankii ay weerareen.
Ma jirto Cid Xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaas, marka laga tago in shabaaab ay sheegteen in ay weerarkaas ku dileen Askar badan oo ka tirsan Ciidanka Dolwadda.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Oo Gaaaray Gobolka Gedo Iyo Ujeedka Safarkiisa
Golaha Ammaanka QM Oo Kulan Xasaasi Ah Ka Yeelanaya Warbixin Laga Gudbiyay Soomaaliya